Oyena Mveliso wePCB kunye noMvelisi weNdibano-PCBFuture
Ukwenziwa kwePCB kunye nokudibanisa kukuba umthengisi uya kubonelela ngeenkonzo zokwenziwa kwePCB, kwaye adibanise iPCB ngokuthengisa izinto ze-elektroniki kwibhodi yesekethe ngokwayo.
Kwi-PCBFuture, sinikezela zombiniindibano yebhodi yesiphaluka eprintiweyoiinkonzo kunye neenkonzo zokuvelisa ibhodi yesekethe eprintiweyo.Siqinisekisa ukuba uhambisa ishedyuli ngexesha kwaye ufumane elona xabiso lilungileyo.Zonke ii-PCB zihlangabezana nomgangatho ophezulu osekwe yi-IPC 600. Njengoko i-PCBFuture ingumqeqeshi oqinisekisiweyo we-IPC we-IPC a-610, siyazi ukubaluleka komgangatho webhodi engenanto kunye nezinto ezinokuphucula umsebenzi wendibano ye-PCB.
Uthini umahluko wokwenziwa kwe-PCB kunye neNdibano yePCB?
PCB (ibhodi yesekethe eprintiweyo) yibhodi esebenzisa umkhondo conductive, pads, kunye nezinye iimpawu ezikrolwa ngefoyile yobhedu laminated kwi substrate non-conductive ukudibanisa ngombane amacandelo elektroniki.I-PCB inokuba necala elinye (enye yobhedu), i-double-side (i-copper layers ezimbini) okanye i-multilayer (umaleko wangaphandle kunye ne-inner layer).Abaqhubi kwiileya ezahlukeneyo badityaniswe ngemingxunya (ifakwe kwimingxuma).I-Multilayer PCB ivumela ukuxinana kwecandelo eliphezulu kunye nobunzima boyilo.
I-PCBA (indibano yebhodi yesekethe eprintiweyo) luhlobo lwePCB ukuba onke amacandelo kunye neenxalenye zidityanisiwe kwaye zifakwe kwi-PCB.Ngoku inokugqiba umsebenzi we-elektroniki woyilo lwayo.
Ngaba i-PCBFuture ibonelela ngenkonzo yokuvelisa kunye nendibano yePCB?
I-PCBFuture inokubonelela ngenkonzo yokuvelisa kunye nendibano yePCB.Sinabathengi abavela kumashishini ahlukeneyo malunga neendleko-ukusebenza, umgangatho, ukuhanjiswa kunye naziphi na ezinye iimfuno.Ukusuka kwi-PCB layout ukuya kwi-PCB prototyping, ukuveliswa kwezinto ezininzi, kunye nendibano ye-PCB, iinkonzo zendibano yebhokisi ye-elektroniki, iibhodi zethu zesekethe eziprintiweyo zisetyenziswa ngokubanzi kwiirobhothi, zonyango, iimoto, unxibelelwano, imveliso ye-elektroniki kunye nomthengi.
Sizibandakanya kula mashishini alandelayo: i-PCB eguquguqukayo, i-PCB yesiko, i-prototype PCB, indibano ye-PCB ye-turnkey,jika ngokukhawuleza indibano ye-pcb, indibano yePCB ye-elektroniki, indibano encinci ye-PCB yebhetshi, njl.
I-PCBFuture inenkqubo yokulawula umgangatho oqinileyo kunye nazo zonke iziqinisekiso ezifana ne-TS16949, UL, RoHS, CE, ISO, njl.Kwi-PCBA, sine-IQC, i-AOI, i-Function Test, i-QA.Ezi zizinto ezisisiseko kodwa zibaluleke kakhulu kushishino lwePCB.
Njengeyona PCB idumileyo yokuvelisa kunyeinkampani yendibanoe-China, besibonelela ngezisombululo ezipheleleyo zokwenziwa kombane iminyaka eli-13 ukuhlangabezana neemfuno zemarike yaseTshayina.
Kutheni ukhetha i-PCBFuture yokwenziwa kwePCB yakho kunye nenkonzo yendibano?
1. Ukuchaneka okuphezulu kakhulu kunye nokuchaneka-Iiprototypes zethu zibalaseleyo ngokuchaneka kwaye zinokuhlangabezana neenkcukacha zabathengi.Oku kungenxa yokuba sithatha umgangatho kunye neenkcukacha ngokubalulekileyo.
2. Ukutshintsha ngokukhawuleza-siyaliqonda ixabiso lexesha lomthengi.Ke ngoko, sizama ukwenza iprototype yakho ngesantya esifanelekileyo.Ke ngoko, inkonzo yethu yendibano ekhawulezayo ye-PCB inokunciphisa ixesha lakho lokulinda ukusuka kwiiveki ezimbalwa ukuya kwimizuzu embalwa.
3. Amaxabiso aphantsi kakhulu-sinendlela ebanzi yokukunceda ugcine amaxabiso aphantsi kwaye afikelelekayo.Ke ngoko, siya kuyigqiba iprojekthi yakho ngebhajethi efanelekileyo.
4. Ulungiso lwemposiso-Iprototype yethu yePCB ibaluleke kakhulu ekufumaneni iziphene, ngoko inokuphepha ukusilela okukhulu kamva.Ukususa ezi ziphene kwangoko kunokwenzeka kunokukongela ixesha elininzi kunye neendleko
5. Ucaphulo olukhawulezayo kwi-Intanethi-ungacela iiprototypes zePCB.Kufuneka kuphela ungenise uyilo PCB kwaye ufumane iziphumo.
6. Uvavanyo lwesampula ngaphambi kokuveliswa ngokupheleleyo - Siyakuvumela ukuba uvavanye iibhodi zeprototype kwaye uqinisekise ukuba zisebenza njengoko zifunwa.
Inkonzo esinokubonelela ngayo:
1. Ukugqitywa komphezulu: I-HASL Lead okanye iLead free, ENIG, Im Silver, OSP, Gold plated, njl.
2. I-SMT/SMD enecala elinye namacala amabini.I-THT (ngendibano yeteknoloji yomngxuma).SMT & ngendibano umngxuma.
Ukuhlolwa okubonakalayo: ukujonga umgangatho jikelele.
I-FAI: ukujonga umgangatho ogcweleyo kusetyenziswe kwi-PCB yokuqala ukudlula kuzo zonke izigaba zemveliso.
Ukuhlolwa kwe-X-ray: iitshekhi ze-BGAs, i-QFN kunye neebhodi zesekethe ezingenanto.
Uvavanyo lwe-AOI: ijonga i-solder paste, i-0201 amacandelo, amacandelo alahlekileyo kunye ne-polarity.
Uvavanyo lwe-3D AOI: ijonga izinto ezilahlekileyo nezingekhoyo ze-SMT kwimilinganiselo emithathu.
Uvavanyo lwe-3D SPI: ilinganisa umthamo ochanekileyo we-solder paste yendibano ye-SMT.
I-ICT (Uvavanyo lweSekethe).
Uvavanyo olusebenzayo (Ukulandela iinkqubo zakho zovavanyo).
Ukusukela oko PCBFuture yasekwa, siye sasebenzisana kunye neenkampani ezininzi ekhaya nakwamanye amazwe ngembono yomgangatho wokuqala kunye nomxhasi nguthixo ozuze ukuthandwa okuphezulu.Sizuze intembeko kunye nenkxaso yeenkampani ezivela kumazwe angaphezu kwama-40 ngamaxabiso akhuphisanayo, iimveliso ezisemgangathweni ophezulu kunye nenkonzo ebalaseleyo.
I-FQA yokwenziwa kunye nokuhlanganisa iPCB
1. Ngaba ungayenza iX-reyi emva kwendibano?
Ewe, sinokwenza iimvavanyo zeX-reyi emva kokuhlanganisana kumacandelo afana ne-BGA.
2. Ngaba unokuqinisekisa umgangatho wamacandelo owasebenzisayo?
Sithenga zonke izinto zethu kwiiarhente ezithembekileyo njengeDigiKey kunye neMouser.Ngaloo ndlela, sinokuqinisekisa umgangatho wamalungu esiwasebenzisayo.Sikwanalo nesebe lokulawula umgangatho eliqinisekisa umgangatho wazo zonke iindawo phambi kokuba zibandakanywe kwiimveliso zethu.
3. Kutheni ufuna iigerber?
Kwicala ngalinye eline-SMT okanye icandelo lomngxuma esiya kuthi sizalise:
1. Ubhedu - ukuqinisekiswa kwendawo yepad kunye nokulinganisa.
2. Ncamathisela - ukuvelisa i-stencil.
3. I-Silk - yereferensi yendawo yomenzi kunye nokuqinisekiswa kokujikeleza.
4. Kwenzeka ntoni ukuba i-UPS, FedEX, okanye iDHL ifika emva kwexesha ekundiziseni iodolo yam?
Sisebenza nzima kakhulu ukuqinisekisa ukuba zonke iiodolo zakho PCB zithunyelwa ngexesha.Kukho amaxesha, nangona kunjalo, xa abathuthi bempahla benokulibaziseka kunye / okanye benze iimpazamo zokuthunyelwa.Siyazisola xa oku kusenzeka kodwa asinakuba noxanduva lokulibaziseka ngaba bathwali.
5. Njani PCB Assembly Express iikhomponenti umyalelo Turn-Key odolo?
Si-odola kwibhili yakho echanekileyo yokuodola i-5% okanye i-5 eyongezelelweyo kuninzi lwamacandelo.Ngamanye amaxesha sijongana nobuncinci / iiodolo ezininzi apho izinto ezongezelelweyo kufuneka zithengwe.Ezi nxalenye ziyalungiswa, kwaye imvume ifunyenwe kumthengi wethu ngaphambi kokuodola.
6.Yeyiphi izakhono zeNdibano zePCB ezibonelelwa nguwe?
Sinikezela ngezakhono zeNdibano ye-PCB kubandakanya i-smt kunye nomngxuma, indibano ye-smt emacala amabini, ukulungiswa kwe-pcb encinci, indibano yentambo kunye nokubopha kunye nokunye.
Ewe, sinikezela ngendibano ehambelana neRoHS.
8. Loluphi uhlobo lweenkonzo zokwenziwa kwePCB ozinikezelayo?
Sinikezela ngokujika ngokukhawuleza iiNkonzo zokuVelisa iPCB yoLwayo lwePCB, iNdibano yePCB, iPCB yokuFakwa, iPrototype yePCB, iNdibano ye-Electro-Mechanical, iPCB Box Builds, nokunye.
9.Yiyiphi imigangatho yakho yendibano yePCB?
Sibonelela nge-IPC kunye ne-ISO yeNdibano ye-PCB eqhelekileyo.
10.Yeyiphi imiba echaphazela ixabiso lendibano yePCB?
Kukho uluhlu lwezinto ezichaphazela ngokuthe ngqo iindleko ze-PCB yeNdibano ezibandakanya iteknoloji esetyenzisiweyo, ibhodi enye okanye ibhodi emacala amabini, inani lokubekwa, ukugquma, ukuvavanywa, iimfuno zokuthumela, kunye nokunye.